Windows मा, सातौं संस्करण कि मा उत्पन्न महत्त्वपूर्ण घटनाहरू ट्र्याक को एक समारोह छ सिस्टम सफ्टवेयर। को "माइक्रोसफ्ट" मा, शब्द "घटना" एक विशेष रजिस्टर र संकेत नै प्रयोगकर्ता वा प्रशासकहरूले मा लिपिबद्ध छन् जो सिस्टम मा कुनै पनि घटना, बुझाउँछ। यसलाई चलाउन, अनुप्रयोग इनकार वा उपकरणको गलत स्थापना इच्छा छैन कि एक उपयोगिता हुन सक्छ। सबै दुर्घटना रेकर्ड र स्टोर घटना लग विन्डोज7यो पनि छ र कालानुक्रमिक क्रममा सबै गतिविधिहरु, एक systemic नियन्त्रण उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ OSes को सुरक्षा सुनिश्चित देखाउँछ, त्रुटिहरू सच्याउनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रणाली निदान।
समय समयमा आगमन जानकारी उपस्थिति लागि लग जाँच गर्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण डाटा को संरक्षण को लागि प्रणाली सेटिङहरू गर्नु पर्छ।
विन्डो7- कार्यक्रम
कम्प्युटर आवेदन "घटना दर्शक" कार्यालय उपकरण "Maykrasoft", नियन्त्रण र घटना लग डिजाइन जो एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। यो सिस्टम को स्वास्थ्य र निरन्तर त्रुटिहरू को उन्मूलन निगरानीका लागि एक आवश्यक उपकरण हो। उपयोगिता नियन्त्रण दस्तावेजीकरण घटना, "घटना लग" भनिन्छ "windose"। यो सेवा सुरु गरिएको छ भने, यो सङ्कलन र यसको अभिलेख सबै महत्त्वपूर्ण डाटा रेकर्ड गर्न थाल्छ। Windows7घटना दर्शक निम्न कदम प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ:
- यो अभिलेख लिपिबद्ध डाटा हेर्न;
- विभिन्न घटनाहरूको फिल्टर प्रयोग र प्रणाली सेटिङहरू पछि प्रयोगको लागि तिनीहरूलाई भण्डारण;
- केही घटना र व्यवस्थापन सदस्यता सिर्जना;
- कुनै पनि घटना को मामला मा केहि कार्यहरू बाँडफाँड।
एक Windows7घटना लग कसरी खोल्न?
कार्यक्रम निम्नानुसार सुरु घटना दर्ता लागि जिम्मेवार छ:
1 त्यसपछि खोल्न, मनिटर तल्लो बायाँ कुनामा "सुरुवात" थिचेर मेनु सक्रिय "कन्ट्रोल प्यानल।" नियन्त्रण सूचीमा, "प्रशासन" चयन गर्नुहोस् र यो उप मा, "घटना दर्शक" मा क्लिक गर्नुहोस्।
2. त्यहाँ विन्डोज मा7घटना लग यो हेर्न अर्को तरिका हो, "सुरुवात" खोज बक्स प्रकार MMC मा मेनुमा जानुहोस्, र त्यसपछि एक फाइल खोजी गर्न अनुरोध पठाउनुहोस्। अर्को तालिका एमएमसी, जहाँ तपाईं उपकरण को वाहेक र हटाउने संकेत एक अनुच्छेद चयन गर्न आवश्यक खुल्छ। अर्को, मुख्य सञ्झ्यालमा "घटना दर्शक" को साथै।
आवेदन कस्तो वर्णन गरिएको छ?
प्रणाली फाइलहरू र आवेदन लग सेवा: सञ्चालन प्रणाली विधवाहरूलाई7र Vista घटना लग दुई प्रकार स्थापित छन्। पहिलो विकल्प विभिन्न आवेदन चलिरहेको र सुरक्षा को प्रदर्शन संग सम्बन्धित छन् भनेर प्रणाली-विस्तृत घटनाहरू लक गर्न प्रयोग गरिएको छ। दोस्रो विकल्प आफ्नो काम घटनाहरूको रेकर्डिङ लागि जिम्मेवार छ। नियन्त्रण र सबै डाटा सेवा व्यवस्थापन गर्न छ "घटना लग" निम्न वस्तुहरू विभाजित छ जो "हेर्नुहोस्", प्रयोग ट्याब:
- आवेदन - एक विशेष कार्यक्रम संग सम्बन्धित छन् यहाँ भण्डारण छन् घटनाहरू। उदाहरणका लागि, हुलाक सेवा, यो स्थान इतिहास जानकारी स्थानान्तरण भण्डार छ मेलबक्सहरू विभिन्न घटनाहरु, र यति मा।
- वस्तु "सुरक्षा" मा लग सम्बन्धी सबै डाटा कायम रहन्छ र यो बाहिर, प्रशासनिक क्षमता र पहुँच स्रोतहरू प्रयोग।
- स्थापना - विन्डोज7घटना लग मा स्थापना र प्रणाली र यसको आवेदन कन्फिगर गर्दा उत्पन्न कि डाटा समावेश गर्दछ।
- प्रणाली - सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यालय आवेदन चलिरहेको बेला, वा स्थापना गर्दा र उपकरण चालकहरू अद्यावधिक, विभिन्न सन्देशहरू यस्तो विफलता रूपमा OSes सबै घटना, कब्जा।
- तोक घटनाहरू - यो विकल्प सेट गर्दा, त्यसपछि यसलाई अन्य सर्भर आउँछ कि जानकारी भण्डारण गर्दछ।
मुख्य मेनु अन्य उप-वस्तुहरू
पनि मेनु "प्रशासन", मा जहाँ Windows7मा घटना लग र छ, केही थप बुँदा हो:
- इन्टरनेट एक्सप्लोरर - प्रयोग र एउटै नाम को ब्राउजर कन्फिगर कहिले कि घटनाहरू रेकर्ड छन्।
- विन्डोज PowerShell - यो फोल्डरमा PowerShell प्रयोग सम्बन्धहरु संग घटना रेकर्ड छन्।
- घटनाक्रम उपकरण -, लग उपकरणहरू द्वारा उत्पन्न छन् डाटा समावेश यो विकल्प सेट गरिएको छ भने।
XML मा "Vista" को प्रकार मा आधारित सबै घटनाहरुको रेकर्ड प्रदान गर्दछ "सात" को सम्पूर्ण संरचना। तर कसरी सञ्झ्याल7घटना लग कार्यक्रम प्रयोगको लागि यो कोड प्रयोग गर्न जान्न कुनै आवश्यकता छ। परिशिष्ट "घटना दर्शक" आफैमा सबै गर्छन, एक सुविधाजनक र सरल तालिका मेनु आइटम संग प्रदान गर्नुहोस्।
Windows7मा हेर्न कसरी सिक्न चाहने एक प्रयोगकर्ता, घटना लग पनि बुझ्न र हेर्न चाहेको डाटा को विशेषताहरु मा पर्छ। आखिर, त्यहाँ "घटना दर्शक" मा वर्णन विभिन्न घटना विभिन्न गुण हो। यी विशेषताहरु तल छलफल गरिनेछ:
- स्पा - कार्यक्रम, लग मा घटनाहरू फिक्सिंग। यहाँ यो वा त्यो घटना प्रभावित अनुप्रयोगहरू वा चालक को नाम रेकर्ड छन्।
- घटना आईडी - घटना को प्रकार निर्धारण कि मान सेट। यो कोड र घटना स्रोत को नाम को लागि एक प्राविधिक सहयोग सिस्टम सफ्टवेयर छ त्रुटिहरू सुधार र सफ्टवेयर असफलता हटाइ।
- स्तर - घटनाको महत्व डिग्री। सिस्टम घटना लग दुर्घटना को छ स्तर छ:
4 एक खतरनाक गल्ती।
त्रुटिहरू को सुधार मा सफल सञ्चालनका5निगरानी।
6 अडिट असफल कार्यहरू।
- सदस्य - जो भयो तर्फबाट डाटा खाता कब्जा घटनाको। यसलाई विभिन्न सेवाहरू नाम, साथै वास्तविक प्रयोगकर्ता हुन सक्छ।
- मिति र समय - घटनाको समय प्रदर्शन रेकर्ड घटना।
- CPU उपयोग - प्रयोगकर्ता आदेशहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक समय।
त्यहाँ गर्दा आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम उत्पन्न कि धेरै अन्य घटनाहरू छन्। सबै घटना सबै सम्बन्धित जानकारी डाटा को विवरण संग "घटना दर्शक" प्रदर्शित हुन्छन्।
कसरी घटना लग सामना गर्न?
घटनाको एक विशेष कार्यक्रम संग हाल कार्यहरू, र उपलब्ध सञ्चालनका एक विकल्प दिइएको बारे जानकारी रेकर्ड जो सिस्टम दुर्घटनाहरु र पत्रिका "अनुप्रयोग" perusing एक आवधिक देखि झुन्डियो को रोकथाम, एक धेरै महत्वपूर्ण बिन्दु।
एक पटक, लग इन तपाईं सबै कार्यक्रम सूची हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज7घटना लग, को उप "परिशिष्ट", प्रणाली मा विभिन्न नकारात्मक घटनाहरू, समय र आफ्नो उपस्थिति, स्रोत को मिति र problematical को डिग्री कारण जो।
यो कन्सोल, तपाईंले पुरानो रेकर्ड को लग खाली गर्न गत केही महिना भन्दा सबै घटनाहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ तालिका को आकार, र धेरै परिवर्तन।
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया घटनाहरू
एक Windows7घटना लग कसरी खोल्न सिक्ने द्वारा, र यो कसरी प्रयोग गर्ने, यो उपयोगी अनुप्रयोग कसरी लागू गर्न सिक्न जारी गर्नुपर्छ "कार्यअनुसूचक।" यसो गर्न, तपाईं खोल्दछ विन्डो मा कुनै पनि घटना मा क्लिक गर्न दायाँ माउस बटन क्लिक गर्न आवश्यकता हो, घटना लागि कार्य तस्वीर मेनु चयन गर्नुहोस्। अर्को समय, त्यहाँ हुनेछ जब सिस्टम मा एक यस्तो घटना स्वतः त्रुटि ह्यान्डलिङ को कार्य र यसलाई ठिक मा स्थापित सञ्चालन प्रणाली सुरु हुन्छ।
पत्रिका मा त्रुटि आतंक लागि कारण छैन
पत्रिकाको सिस्टम विन्डोज7घटनाहरू मार्फत हेर्दा, तपाईंले चिन्ता हुँदैन र यसको बारेमा आतंक, समय समयमा सिस्टम त्रुटिहरु वा चेतावनी देखा देख्नेछन्। पनि पूर्ण कम्प्युटर काम त्रुटिहरू र असफलता एक किसिम दर्ता गर्न सक्छन्, सबै भन्दा जो आफ्नो पीसी प्रदर्शन गर्न गम्भीर खतरा हो।
हाम्रो अनुप्रयोग वर्णन कम्प्युटर भन्दा प्रणाली प्रशासक नियन्त्रण र उदीयमान समस्या उन्मूलन सुविधा गर्न सिर्जना गरिएको छ।
एक तरिका कार्यक्रम र प्रणाली गर्न कब्जा र एक ठाउँमा आफ्नो कम्प्युटरमा सबै घटनाहरू भण्डारण गर्न - पूर्वोक्त आधारित, यो घटना लग भनेर स्पष्ट हुन्छ। यो लग पसलहरु सबै सञ्चालन त्रुटि सन्देश र चेतावनी प्रणाली अनुप्रयोगहरू।
हामी यस लेखमा सिकेका सबै - जहाँ Windows7मा घटना लग यसलाई खोल्न भन्दा, छ, यो कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी नयाँ त्रुटिहरू समाधान गर्न। तर, धेरै सोध्न "हामी किन चाहिन्छ, हामी यो ज्ञान रूपमा यसको आवश्यकता गर्दैन सिस्टम प्रशासक, छैन प्रोग्रामर, तर साधारण प्रयोगकर्ताहरू, हो?" तर यो दृष्टिकोण गलत छ। आखिर, एक व्यक्ति, केही साथ बिरामी डाक्टर गर्न जानुअघि हुँदा, उहाँले विभिन्न हालतमा नै निको पार्न प्रयास गरिरहेको छ। र धेरै अक्सर बाहिर जान्छ। र एक डिजिटल शरीर छ जो एक कम्प्युटर, "बिरामी" गर्न सक्नुहुन्छ, र यस लेखमा कसरी यो "रोग" को कारण निदान गर्न एउटा तरिका देखाउँछ को "सर्वेक्षण" को परिणाम अनुसार पालना कसरी सही निर्णय गर्न सक्छन् "उपचार।"
त्यसैले कसरी घटना जानकारी हेर्न के मात्र सिस्टम डिजाइनर लागि उपयोगी, तर पनि साधारण प्रयोगकर्ता हुनेछ।
म विन्डोज 8 मा पासवर्ड बिर्सनुभयो? कसरी आफ्नो पासवर्ड रिकभर गर्न
असुरक्षित विचार: कसरी विन्डोज7रजिस्ट्रीमा मा लग गर्न
ThermaBag आफ्नै हात: यो के कसरी
रूपमा Adobe Flash Player अद्यावधिक Crimea मा पछिल्लो संस्करणमा
Anapa मा आराम: समीक्षा र सिफारिसहरू
म बाल बाहिर गिर कि, सपना सपना देख्यो? पुस्तक मान भन्नेछु सपना
महत्वाकांक्षा। यो के हो?